Somaliland | Mustaqbal Radio
Home - Somaliland
Hargeysa: Qof ku geeriyooday Balli uu ku dabaalanayay
Magaalada Hargeysa Ciidanka gurmadka deg degga ah ayaa soo saaray Meydka Qof ka mid ahaa dadka degaanka oo dabaal u tagay Balli ku yaalla Duleedka Magaalada. Qof ka mid ahaa dadkii ka agdhawaa xilliga qofkaas uu galayay ayaa u sheegay Ciidanka in Qod Balliga ku dabaalanayay la la’yahay. Ciidamada Gurmadka sameynayay ayaa markii hore dabaal ku raadiyay waana ay u ...
Dowladda Ruushka waxaa ay wadahadal kula jirtaa Maamulka Somaliland,waxaana ay dooneysaa in ay saldhig Milatari ka dhisato magaalada Saylac ee Gobolka Awdal. Magaaladaas waxa ay ku taalla Badda Cas,waxaana ay isu muuqdaan Saldhigyada Waddamo shisheeye ku leeyihiin dalka Jabuuti,waddamadaas waxaa ka mid ah mareykanka,France,Jaban, China iyo kuwo kale. Ruushka oo ballaarinaya awooddiisa dhinaca Dibadda ah ayaa waxaa uu hadda qorsheynayaa ...
Cirro: “Siilaanyo God ayuu ku riday Somaliland Muusana ciidduu ku geddiyay”
Hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee Somaliland C/Raxmaan Cabdullahi Cirro ayaa ku eedeeyay Madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Siilaanyo in uu god ku riday Somaliland. Cirro waxaa uu ka jawaabayay hadal ka soo baxay Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka oo sheegay in Dekadda Berbera ay kala heshiiyeen Dowladdii hore ee uu madaxawyenaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud. Anwar Gargaash ayaa ...
Guddoomiyayaasha Baarlamaannada D.Goboleedyada oo ka qeybgelaya shirka dib u eegista Dastuurka
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka dib u eegista Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya,waxaana ka qeybgelaya mas’uuliyiin kala duwan. Xubnaha ka qeybgelaya waxaa ka mid ah Guddoomiyayaasha Baarlamaannada Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah dowladda Federaalka ah,Ururrada Bulshada Rayidka ah,Guddoomiyaha Guddiga dib u eegista Dastuurka ee labada aqal,Guddoomiyaha Aqalka sare iyo Sharci yaqaanno dhinaca Dastuurka ah. Shirkan ayaa looga hadlayaa ...
Hargeysa: Qof ku dhintay Daad qaaday Gaari uu la socday
Ugu yaraan hal qof ayaa la xaqiijiyay in uu ku geeriyooday duleedka Bari ee Magaalada Hargeysa kaddib markii Gaari uu wade ka ahaa uu daad ku qaaday dooxa Aw-Barkhadle ee Bariga Hargeysa. Guddoomiyaha Tuulada Aw-Barkhadle ,Mahad Maxamuud Gaheyr ayaa sheegay in Gaari nooca Waaraadka ah oo ka baxay Berbera uu Daad ku qaaday duleedka Hargeysa. Gaariga ayaa waday Khudaar uu ...
Gaas oo shuruud ku xiray in la kala qaado Ciidanka isku horfadhiya Tukarraq
Madaxweynaha Maamulka Puntland C/Wali Maxamed Cali Gaas ayaa shuruud adag ku xiray in la kala qaado Ciidamada Maamullada Somaliland iyo Puntland. Arrintan waxaa ay soo baxday kaddib markii Boqor Buurmadoow uu ka codsaday Madaxqweynayaasha labada Maamul in ay kala qaadaan Ciidamada isku hor fadhiya Tukarraq. Gaas ayaa sheegay in Ciidamada isku horfadhiya Degaanka Tukarraq oo la kala qaada ay ku ...
Maxkamadda Hargeysa oo 3; sano oo xabsi ah ku xukuntay Naciimo Qorane
Maxkamadda Magaalada Hargeysa ee Maamulka Somaliland ayaa saddex Sano oo xabsi ah ku xukuntay Naciimo Abwaan Qorane oo Billowgii Sanadkan lagu xiray Magaalada Hargeysa. Maxkamadda Magaalada Hargeysa ayaa Naciimo ku soo oogtay labo dambi oo ay ku sheegtay in ay faafisay dacaayad ka dhan ah Hay’adaha Maamulka Somaliland iyo dambiga 2aad oo ay ku sheegtay in ay dal shisheeye ka ...
Puntland oo duq magaalo u magacowday Degmada Laascaanood
Maamulka Puntland ayaa waxaa uu Magaalada Laasacaanood ee Xarunta Gobolka Sool u magacaabay Duq Magaalo,iyada oo magaaladaasina uu ka arrimiyo maamulka Somaliland. C/Qani Maqtal Maxamed ayaa loo magacaabay Duqa Degmada Laasacaanood ee Puntland waxaana laga qaaday Duqii hore ugu magacownaa Magaaladaas Cabdalle Xaajir Warsame. Warqaddan lagu magacaabay Duqa Degmada Laasacaanood ee Puntland waxaa ku saxiixan Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Puntland ...
Somaliland oo aqoonsi uga beddeleneysa Ruushka Saldhig ay ka siineyso Saylac,Warbixin
Wargeyska Orientalreview, ayaa daabacay in Dowladda Ruushka ay dooneyso in ay saldhig Ciidan ka dhisayo maagalada Saylac ee Maamulka Somaliland. Wargeysku waxaa uu sheegay Somaliland ay Saldhigga Saylac ee Ruushka uga beddelenayeso aqoonsi uu siiyo,sidaasna ay ku billaabato Aqoonsiga caalamiga ah ee Somaliland. Saylac waxaa ay Sohdin la wadaagtaa Dalka Jabuuti,halkaas oo Waddamo badan oo Reer Galbeed iyo Reer Bari ahba ...
Awbaan sheegay in laga xaday Miraha heesta Barbar
Abwaan Yuusuf Muuse Cabdi (Maasho), oo u dhashay Dalka Jabuuti ayaa sheegay in Heesta Barbar ee uu qaado Fanaanka iyo maadeeyaha lagu magacaabo Oomar Ereyadeeda laga xaday isaga. Yuusuf Maasho waxaaa uu sheegay in heesta Barbar uu 2004tii isaga sameeyay islamarkaana dugsiga tababarka Macallimiinta Jabuuti lagu soo bandhigay xilligaas. Waxaa uu sheegay in heesta la qalay,ereyada qaar laga tagay halka ...
Wararka naga soogaaraya Magaalada Hargeysa ee Xarunta Maamulka Somaliland ayaa sheegaya in halkaas ay saaka ku geeriyootay Fanaanadda Sahra Axmed Jaamac. Sahra ayaa maalmahan ku xanuunsaneysay Isbitaal ku yaalla Magaalada Hargeysa halkaas oo ay saaka ku naf baxday. Geerida Sahra waxaa xaqiijiyay Dhaqaatiirta gacanta ku hayay ee ka howlgala Isbitaalka ay ku xanuunsaneysay. Sahra waxaa ay ka mid ahayd Fanaaniinta ...
Puntland oo dil ku xukuntay Askari u goostay Somaliland
Maxkamadda Ciidamada Maamulka Puntland ee Dambiyada culus ayaa xukun dil ah ku ridday mid ka mid ah Askarta Maamulka Puntland,kaas oo lagu eedeeyay in uu u goostay dhinaca Maamulka Somaliland. Maxkamadda waxay xukun dil ah ku ridey dambiile Maxamed Maxamuud Guure, kaasoo 21 March 2018 kala baxsadey ciidamada Puntland gaari tikniko ah oo qalabaysan. Xukunka ayaa waxa uu ka dhacay ...